Umaki: isivumelwano seleveli yesevisi | Martech Zone
Umaki: isivumelwano seleveli yesevisi
Imibuzo eyi-15 Okufanele Uyibuze Nge-API Yabo Ngaphambi Kokukhetha Ipulatifomu
NgoLwesithathu, uDisemba 30, 2020 NgoLwesine, ngoMashi 4, 2021 Douglas Karr
Umngani omuhle nomeluleki wabhala wangibuza umbuzo futhi ngithanda ukusebenzisa izimpendulo zami kulokhu okuthunyelwe. Imibuzo yakhe ibigxile kakhulu embonini eyodwa (i-imeyili), ngakho-ke ngenze izimpendulo zami zaba ziningi kuwo wonke ama-API. Ubuze ukuthi yimiphi imibuzo inkampani okufanele ibuze umthengisi nge-API yayo ngaphambi kokukhetha. Kungani Udinga Ama-API? I-interface programming interface (i-API) isikhombimsebenzisi sohlelo lwekhompyutha, umtapo wolwazi,